လူထုကျန်းမာရေး (((လေဖြတ်မည့် ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ - ၁၁ချက်)
Posted by Chit Snow on November 30, 2012 at 4:00pm
အီးမေးလ်ပို့ မယ် ဘလော့ ပိုစ်ကြည်မယ်
၁။ ဦးခေါင်းနောက်စေ့တွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မကြာခဏ မူးဝေခြင်း။
၂။ ခြေ,လက်တို့တွင် မကြာခဏ ကျဉ်ခြင်း၊ကိုယ်လက် လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း။
(Male over 45yrs,numbers sensation longtime) အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံးချိန်တွင် ခြေ,လက်များ
ထုံကျဉ်ခြင်း။ လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ် ကွေးရာမှ ချက်ချင်းဆန့်မရခြင်း။
၁၁။ ရေချိုးပြီးလျှင် မျက်စိများ ကြာမြင့်စွာ နီရဲခြင်း။
ကြိုတင်သိရှိပြီး လူသားများအားလုံး လေဖြတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ.....
၁၁။ မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမှောင်အတိ ကျသွားပြီး ... ခန့်မှန်း ၁၅ စက္ကန့်လောက်ပြန်မမြင်လောက်အောင်
ပိန်းပိတ်သွားရင် လေဖြတ်ရန်နာရီပိုင်းသာလိုတော့သည့် အနီးဆုံးအခြေအနေပါ။
ကျန်းမာရေးဂျာနယ် မှ ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်.
Posted by Oasisthetoo at 7:27 AM No comments: Links to this post
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်များ
E-Mail this article Printable Version
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေသော မိဘပြည်သူများ၏ ဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် အလို့ငှာ အိုင်တီဝန်ဆောင်မှု၊ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း နှင့် ကြိုးတယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စများ၌ သုံးစွဲသူများအတွက် အခက်အခဲများ၊ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါက မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဌာန၊ အမည်- ၁။ ဦးဌေးဝင်း၊ ရာထူး- အင်ဂျင်နီယာချုပ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်း-ဝ၉-၈၆၃ဝဝ၁ဝ၊ E-mail/Address- cemobile@mptmail.net.mm၊ ၂။ ဦးစိုးအောင်၊ ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ်၊ ဝ၉-၈၆၃ဝဝဝ၁၊ ee1_switch@mptmail.net.mm၊ ၃။ ဦးကိုကိုအောင်၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ ဝ၉-၈၅ဝဝဝဝ၁၊ ee2_@mptmail.net.mm၊ ၄။ ဦးအောင်ကျော်သက်၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ ဝ၉-၅၁ဝဝဝ၂၇၊ bhngsm@mptmail.net.mm၊ ၅။ ဒေါ်ခင်ဖြိုး၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၁ဝ၊ wlugsm@mptmail.net.mm တို့သို့လည်းကောင်း၊ အော်တိုတယ်လီဖုန်းဌာန၊ အမည်- ၁။ ဒေါ်ချယ်ရီမျိုးတင့်၊ ရာထူး- ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ် (အိတ်ချိန်း)၊ မိုဘိုင်းဖုန်း- ဝ၉-၄၅ဝ၄၅ဝ၇၇၇၊ ဝ၁-၃၈ဝ၁၈၈၊ ၂။ ဦးဇော်မင်း၊ ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ် (အိတ်ချိန်း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၆၆၊ ဝ၁-၃၇ဝ၁၈၈၊ Email/Address- ee1_swit_cep@mptmail.net.mm၊ ၃။ ဦးသန်းလှိုင်၊ ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ် (လိုင်း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၅၅၊ ဝ၁-၃၈ဝ၃၃၃၊ ee1_line_cep@mptmail.net.mm၊ ၄။ ဦးသိန်းမြင့်ထွန်း၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး (လိုင်း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၇၈၊ ဝ၁-၂၂၂၃၃၃၊ ၅။ ဦးအေးမင်းလှိုင်၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး (အိတ်ချိန်း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၈၅၊ ဝ၁-၃၇၂၁၈၈၊ ၆။ ဦးကျော်ဝင်း၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး (အိတ်ချိန်း)၊ ဝ၉-၅၄၂၁ဝ၉၉၊ ဝ၁-၅ဝဝ၉၉၉၊ ၇။ ဦးဇော်မင်းဦး၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး (OCS)၊ ဝ၉-၅၄၂၁ဝ၇၇ တို့သို့လည်းကောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာန၊ အမည်- ၁။ ဦးခင်မောင်ထွန်း၊ ရာထူး- အင်ဂျင်နီယာချုပ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်း- ဝ၉-၈၆၃ဝဝ၄၂၊ E-mail/Address- khinmaungtun.ceit@mptngw.net.mm၊ ၂။ ဒေါ်ခင်ဆွေဌေး၊ ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ်၊ ဝ၉-၅၁ဝဝဝ၅ဝ၊ ဝ၉-၈၆၃ဝဝ၅ဝ၊ kshtay@mpt.net.mm၊ ၃။ ဦးရဲနိုင်မိုး၊ ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာချုပ်၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၇၄၊ yenaingmoe@mptngw.net.mm၊ ၄။ ဒေါ်နွယ်နီစိုးရင်၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ ဝ၉-၂ဝဝဝဝ၃၇၊ nwenisy@mptngw.net.mm၊ ၅။ ဦးနေလင်းထွန်း၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၇၂၊ naylinhtun@mptngw.net.mm၊ ၆။ ဦးအောင်သူဟိန်း၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ ဝ၉-၈၃ဝဝဝ၅၆၊ aungth@mptngw.net.mm၊ ၇။ ဒေါ်ညိုညိုစိမ့်၊ အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၂၅၊ nnseint@mptngw.net.mm၊ ၈။ ဒေါ်လှမြတ်ဟန်၊ မန်နေဂျာ၊ ဝ၉-၅၄ဝဝဝ၂၃၊ hlamyathan@mptngw.net.mm စသည့် ဖော်ပြပါဌာနများ၏ အရာရှိများထံသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သိရသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Oasisthetoo at 7:00 AM No comments: Links to this post
မြနန္ဒာဂျာနယ် အတွဲ-၁၊ အမှတ်၄၂၊ စာမျက်နှာ-၁၃က ဆောင်းပါးလေးပါ
“ဟာ…….အပျိုကြီးတွေ ဈေးအဝေးကြီးကို တကူးတက လာလိုက်ကြတာဟေ့” လို့ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ထိတွေ့ သွားလာနေရသော ရုံးမှ အပျိုကြီးမမတို့အား နောက်လိုက်မိသောအခါ “ဟဲ့….အကောင်တွေရဲ့ ငါတို့က ထားရာနေ စေရာသွားနေရတဲ့ ဘုံကျွန်တွေဟဲ့…..နင်တို့လို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တကာ လည်သွားနိုင်တဲ့ အားအားယားယားတွေ မဟုတ်ဘူး” လို့ပြန်တွယ်သည်။
“ အခုအမတို့က ဒါဘာလာလုပ်ကြတာလဲ” ဆိုတော့ “ငါတို့ မဖုရားသခင်က ယတြာချေချင်တယ် ဆိုလို့ ဟေ့…..ပန်းနဲ့တခြားတိုလီမုတ်စတွေ လာဝယ်တာ…..တကတည်းသိလား….. ရုံးအားရက် တနင်္ဂနွေလေးတောင် အေးအေးဆေးဆေး မနားရပါဘူးဟယ်…..သူတို့ဝေယျာဝစ္စတွေ လိုက်မနေ ရတာ…..သွားမယ်ဟေ့…..ယတြာချိန် နောက်ကျလို့ ဟိုက ပုပ်သိုးနေအုံးမယ်” ဆိုကာ စာရေးမမ အပျိုကြီးတို့ တစ်သိုက် ပြောချင်တာတွေ ပြောလိုက်ရလို့ အမောတွေ ပြေသွားသည့်ထင် ချာကနဲ လှည့်ထွက် သွားကြသည်။
သူတို့ဘဝကလည်း သနားစရာ။ တနင်္လာက သောကြာအဆုံး။ စနေတစ်ရက်လုံးက အချိန်ပို သည်နားရတဲ့ တနင်္ဂနွေက ဝေယျာဝစ္စတဲ့။ ရုံးတက်ချိန်က ကြည့်အုံး။ မနက်(၈)နာရီကစလို့ ညနေ(၄)နာရီ ရုံးဆင်းတော့ အရာရှိကသာ အိတ်ဆွဲလို့အိမ်ပြန်တာ။ သူတို့တွေက တစ်နေကုန် လုပ်လက်စတွေဖြတ်၊ မနက်အတွက် လိုအပ်တာတွေစီစဉ် ပြင်ဆင်ထားခဲ့ရသေးသည်။ သူတို့ အဆောင်ပြန်ရချိန်က (၆)နာရီကျော်လို့ (၇)နာရီထိုး ဆိုတာ ဂျပိုးထိုးနေကျ ကျွန်တော်အသိ။
တစ်ရက်တွင် ဓါတ်ကျလို့ ရုံးဘက်သို့စောစော ကျွန်တော်ခြေဦးလှည့်မိတော့ ဘယ်သူမှ မရောက်သေးတဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ တလှုပ်လှုပ်တရွရွ ညီမငယ်စာရေးမက တစ်ယောက်တည်း ပန်းအိုးလဲ ဆွမ်းတော် တင်နေသည်။ ကုသိုလ်တွေရတော့မှာပဲလို့ စလိုက်မိတော့ “အစ်ကိုရေ ကုသိုလ်တော့ရမယ် ထင်ပါရဲ့…..အိမ်ကဘုရားကတော့ ငုတ်တုတ်၊ ပန်းတောင်မလဲနိုင်ဘူး…..ကြာတော့လေ မွေးထားတဲ့ ကျွန်မကလေး ကတောင် ကျွန်မကိုစိမ်းနေပြီထင်ပါရဲ့…..ကျွန်မကလေ ရုံးအလုပ်ကို သိမ်းကျုံးလုပ်နိုင်ပါရဲ့ …..ဝေယျာဝစ္စတွေက ပိနေတာ” တဲ့ သည်ဝေယျာဝစ္စကို ကျွန်တော်ကြားရပြန်သည်။ ကလေးအမေ ဝန်ထမ်းဘဝကို သနားရပြန်သည်။
အမေ့ရင်ခွင်ကို ခိုမှီးဖို့မျှော်နေရှာတဲ့ ခလေးငယ်ဘယ်နှယောက်ကိုများ ဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်သည်တွေ မိခင် ဝတ္တရားကို ဖောက်ဖျက်စိမ်းကား ရက်စက်နေကြရပြီလဲ။
အဖြူရောင်တွေ မင်မူနေသော ဆံပင်ဖွာလန်ကျဲ၊ သွားတွေပေါ်အထပ်ထပ်တက်ထားတဲ့ကွမ်းချို၊ အဝါဘက် လုသမ်းနေတဲ့ စတစ်ကော်လာ အဖြူနွမ်း၊ ရီဝေဝေမျက်လုံးတွေနှင့် အိတ်ကပ်အတွင်းက ၅၀တန်ဘောပင်က သူ့ဝန်ထမ်းသက်ကိုပြနေသည်။ “ကျွန်တော်လည်း လုပ်သက်ပင်စင် ခံစားတော့မယ်၊ …..ကျွန်တော့်တို့က ဂျင်နရယ် ပြွန်းတွေပါ”လို့ ဆေးပင်စင်ခံစားဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကို ပြောနေသည့်အသံက ကြေကွဲသံတွေ အပြည့်ပါနေသည်။ သူက အမှန်တော့ အမှုထမ်းလိုင်းမှာ ဂိတ်ဆုံး။ သူ့အောက်မှာ အငယ်တွေသာ ရှိတော့သည်။
“စိတ်ကိုကုန်လှပါပြီ၊…..တစ်ခါလာလည်းဒီရုံး…..တစ်ခါလာလည်းဒီရုံး…..သူတို့တစ်တွေမှာ ငွေတွေ သည်လောက် ချမ်းသာပါလျှက် ဟိုတယ်သွားတည်းကြပါလား” ဒါက ရုံးတွင်းနေရရှာရသော သူငယ်ချင်း၏ ဇနီးထံမှ ပွစိပွစိအသံဖြစ် သည်။ သူငယ်ချင်းကတော့ “ငါဝန်ထမ်းပဲယူထားမိတာလား၊….. အိမ်ဖော် ယူထားတာလားကို မကွဲပြားတော့ပါဘူးကွာ” ဟု ၀မ်းနည်းပက်လက် ဆိုရှာသည်။ သူငယ်ချင်း၏ဇနီးရုံးကို ဝင်ထွက်တည်းခိုကြတာက သူတို့လူကြီးတွေ သာမက ထိုလူကြီးတို့၏ အပေါင်းအသင်း ဆွေမျိုးညာတကာ တစ်စုတွေလည်း ပါသေးသည်ဆိုဘဲ။ သူငယ်ချင်းဇနီး တစ်တွေမှာ ရုံးတွင်းနေအမာခံတွေမို့ တည်းသူတွေလာတိုင်း တံမြက်စည်းလှည်း၊ ကြမ်းတိုက်၊ အိပ်ယာခင်း၊ ပုဂံဆေး၊ စားပွဲထိုးလုပ်ကာ ကိုယ့်အခန်းလေး ကိုယ်ပြန်တော့ သန်းခေါင်ယံ။ ဒါကအမြဲလို့မပြောနိုင်တောင် မကြာခဏ။ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းနှင့်အတူ သူတို့သမီးလေးနဲ့ ကူဆော့နေကြမို့ ဓါတ်သိ။ “မေမေလာပြီလား” “မေမေလာပြီလား” နဲ့ အိပ်ချင်စိတ်ဇွတ်တင်းထားကာ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်လက်ပေါ် သူငယ်ချင်း လက်ပေါ် မျက်တောင်စဉ်းမှေး အိပ်ပျော်ရှာသော သမီးကလေးဖွေးဖွေး၏ သနားစရာပုံရိပ်က မေ့မရ။
“ဆယ်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်တက်ဘွဲ့ရခဲ့တာ လူကြီးအင်္ကိင်္ျီလျှော်ဖို့ ထမင်းပြင်ကျွေးဖို့ လားတောင် မသိပါဘူးဟယ်” ဆိုလာတာက နယ်တစ်နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျွန်တော်နှင့် ဆယ်တန်းအတူ အောင်ပြီး အလုပ်ခွင်ထဲတန်းဝင်သွားသော သူငယ်ချင်းမရဲ့ မချိတင်ကဲစကား။ “သူတို့ နယ်လာကြတာ ဟယ် အိမ်က မယား၊….. အလုပ်သမားတော့ခေါ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး…..အဝတ်လဲ ငါတို့လျှော်ပေးရ…..မီးပူတိုက်ပေးရ…..အိမ်ရှင်း၊ ထမင်းချက်ပြီး တစ်နေ့သုံးနပ်သွားပြင်ကျွေးရသေး တယ်ဟဲ့…..နယ်ဆိုတော့ ရုံးအလုပ်ကသိပ်မရှိပါဘူး…..ဒါပေမယ့် သွားချင်ရာမသွားရ၊ နားချင်တာလည်း မနားရ…..စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ကိုမရှိပါဘူး၊…..နင့်ကိုအားကျလိုက်တာ”တဲ့။ သူငယ်ချင်းကိုလည်း သနားရပြန်ရော။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာစည်မြို့နယ်၌ ၂၀၀၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာ(၄)ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးပွဲတွင် ကိုမင်းကိုနိုင်က “ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းထဲ မှာ ဒေါင်းအလံ ကိုင်ပြီး ထွက်လာတယ်ဆို တစ်ချက်ထဲပါ။ အနိုင်ကျင့်လွန်းနေလို့။ မခံချင်လို့ပြန်ချတာ ဒီတစ်ခု ထဲပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘတ်စ်ကားစီးပြီးကျောင်းသွားရတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ။ ဘာမှ အခွင့်ထူး ခံမရှိဘူး။ သာမန်ပြည်သူထဲက မွေးဖွားလာတဲ့ သားတစ်ယောက်ပါ။ ဘတ်စ်ကား စီးပြီးကျောင်းသွားနေရတဲ့ ဘ၀မှာ ရုံးချိန်ကြီးမှာ နိုင်ငံတော် ကောင်စီတစ်ယောက်ရဲ့ 929 ကားကြီးက အတင်းကျော်တက် ပါတယ်။ သူရုံးသွားမယ်ပေါ့။ ဘတ်စ်ကားကလည်း ရုံးသမားတွေနဲ့ ကျောက်ကုန်းပေါ် ကို တက်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲ့တုန်းက လမ်းလေးတွေက ကျဉ်းကျဉ်းလေး မျက်နှာချင်းဆိုင် နှစ်စီးပဲရှောင်လို့ ရတယ်။ အဲ့ဒီကားကြီး ဂီးဂီးလို့အော်ပြီးတက်နေတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ကနိုင်ငံတော် ကောင်စီက သူ့ကို လမ်းမပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ ဟွန်းတွေတရစပ်တီးပြီးတော့။ သူ့ပေးလို့မရဘူး။ အဲ့ဒါကို သူ မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ ရှောင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာ သူကကျော်တက်ပြီးတော့ ကားပေါ်ကဆင်း ပြီးတော့ ကားမောင်းတဲ့လူကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်တယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကြားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းလွယ်အိတ်ကို ချပြီး လိုက်သွားတယ်။ ဒါမျိုးတော့ ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူး။ ရုံးဝန်ထမ်းတွေလည်း နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖို့လာတာ။ အဲ့တာကို သူနားမလည်ဘူးလား။ သူတစ်ယောက် ထဲ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖို့လာတာမှ မဟုတ်တာ ဒီလောက်ပြောသိရောပေါ့။ အဲ့ဒီလို အနိုင်ကျင့်တာတွေ ဟာ နေရာတကာမှာ။ ဒီနေရာမှမဟုတ်ဘူး။ အခွင့်ထူးခံတယ်။ အနိုင်ကျင့်တယ်။ နှစ်ချက် အဲ့နှစ်ချက်ကို မခံချင်လို့ ကျွန်တော်တို့ တုန့်ပြန်တာ။ ကျွန်တော်တို့ အမှန်တရားအတွက်ပဲ” လို့ပြောသွားတာကို အမှတ်ရ နေပြန်သည်။
သည်ဟာက အမှောင်ကာလဆိုးတစ်ခုကို လျှပ်ပြက်လက်ပြလိုက်သော စကားတွေဘဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အခွင့်ထူးခံတာတွေက အီဝခဲ့ပါပြီ။ တော်လည်းတော်လောက်ပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဟု ကမ္ဘာကိုကြေညာနေသော ကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။ အလင်းတစ်ချို့လည်း ရောင်နီ ပျို့နေပါပြီ။ တကယ်ပြုပြင်ပြောင်း လဲဖို့ အခါတော်လည်းရောက်ပါပြီ။ တနွယ်ငင်တစင်ပါလို့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေထဲ လူမမယ်လေးတွေက အစစ်ပါနေရတာ သနားစရာကောင်းလှပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ကြတာက လူသားတို့ကမ္ဘာမဟုတ်ပါ လား။
ကိုမင်းကိုနိုင်စကားပြန်ကောက်ရပါလျှင် “ရုံးဝန်ထမ်းတွေလည်း နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖို့လာတာ။ အဲ့ဒါကို သူမသိဘူးလား။ သူတစ်ယောက်တည်း နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖို့လာတာမှ မဟုတ်တာ” ဆိုတာက သိပ်လှတဲ့ လူမူကျင့်ဝတ်တွေ လူသားအခွင့်အရေးတွေကို လှစ်ဟာပြလိုက်သလို ဘွားဘွားကြီးမြင်လိုက်ရပါသည်။ လခစားချင်း သူတို့ခွဲခြား သတ်မှတ်သော အရာထမ်းဆိုသူတွေက အမှုထမ်းတွေအပေါ် ငါခိုင်းတာအကုန် လုပ်ရမယ်ဆိုရင် တရားမျှတပါ့မလား။ သူတို့လည်း သူတို့မိတ်ဆွေ၊ သူတို့ဇနီး၊ သူတို့သား၊ သူတို့ မယားတွေနှင့် အများခံစားရသော ရုံးပိတ်ရက်၊ အားရက်၊ နားရက်များကိုခံစားချင်ကြပါလိမ့်မည်။ သတ်မှတ်သော ရုံးဆင်းချိန်တွေအတိုင်း အိမ်အရောက်ပြန်ချင်ဇောတွေ ပြင်းထန်ပါလိမ့်မည်။ ယဉ်ကျေးသော ကမ္ဘာတွင် လူသားချင်းစာနာတာက ဓလေ့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကွယ်နေသောဒေါင့်ကလေးတွေ ရှိတတ်ပါသည်။ ထိုဒေါင့် ကလေးများမှာ အကွယ်တွင် နေရရှာသောအခါ သာမန်ကာလျှံကာဖြင့် မမြင်တတ်ကြ ဘဲ ကျော်လွှား သွားလာနေတတ် ကြပါသည်။ အပြင်တွင် ရှင်းသန့်လင်းလက်နေသော အခါများတွင် ကွယ်ဒေါင့် ကလေးများ တွင်တော့ အမှိုက်တွေ၊ ဖုန်တွေသာမက ပင့်ကူတို့ကလည်း အိမ်ဖွဲ့ပြီး ကြီးစိုးတတ်ပါသေး သည်။ သေချာတာ ကတော့ ကွယ်ဒေါင့်လေးတွေ မှာလည်း သူတို့ရင်ထဲက ဆန္ဒလေးတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြချင်စိတ် ရှိကြစမြဲဆိုတာ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဒေါင့်လေး တွေမှာ လည်း ဒေါင့်လေးတွေ အလျှောက် ဆေးသုတ်သစ်လွင် အလင်းမြင်ချင်သည် ဆိုတာပင် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Oasisthetoo at 10:35 PM No comments: Links to this post
စုကြေး အပေါ် တည့်တစ်ယောက်ရဲ့ အကြံပေးချက်
pyat: ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေနဲ့အလုပ်တွေက ရေကြည်ရာမြက်နုရာပေါ့။ ကျွန်တော့်အရမ်းကြိုက်တဲ့စကားအရပြောရင် တောတန်းလေးဘေးမှာ နေချင်တာပါပဲ။ဒါပေမယ့်တည်ရမယ့်ကတိတွေက ရှိသေးတာကိုး။
ဆရာlinkပေးလို့ကျွန်တော်တော်များသိထားရတယ်။ သူကပြေးနေရတဲ့သူတွေက မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေ ဆိုတာရယ်။ တရားသူကြီးတွေက ပိုက်ဆံပေးရင် အမှုအကုန်လက်ခံတယ်ဆိုတာတွေပြောတယ်။
ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ စုကြေးဒိုင်က ပိုက်ဆံပြန်မထုတ်ပေးရင် စုကြေးထဲ့သူတွေက အလွှဲသုံးစား ၄၀၆နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်။ တိုင်လို့ဒိုင်က အဖမ်းမခံရင် ရုံးကဆင့်ခေါ်လို့မလာရင် တရားခံပြေးကြေညာတယ်။ ကျင့်၅၁၂အရ အပြေးမှုဖွင့်မှာပဲ။ အပြေးမှုဖွင့်ရင့် ဝရမ်းပြေးဖြစ်သွားတာ။
ပြစ်ကျင့်( ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ) အရ တရားခံပြေးရင်ကျင့်၈၇အရ တရားခံပြေးဖြစ်ကြောင်းကြေညာတယ်။ တရားရုံး ရယကရုံးတွေ ရဲစခန်းတွေမှာ ကပ်တယ်။ ကျင့်၈၈အရ ပြေးတဲ့လူရဲ့ပစ္စည်းအိမ်ရှိရင်အိမ်ကို ဝရမ်းကပ်တယ်။ အမှုကတစ်သက်လုံးမပျောက်တော့ဘူး။ ပုံမှန်အမှုတွေဖျက်ဆီးတဲ့နှစ်ရောက်ရင်တောင် အပြေးမှုကိုမဖျက်ဆီဘူး။ ပြန်ဖမ်းမိရင်ပြန်ဖွင့်မှာပဲ။ ဆရာလက်လှမ်းမိသလောက် လိုအပ်သူရှိရင် ဗဟုသုတဖြန့်ပေးလိုက်ပါ။
စုကြေဒိုင်အပေါ်ပဲ ၄၀၆ဖွင့်လို့ရတယ်။ ထည့််သူအပေါ်ဖွင့်လို့ရတယ်လို့မတွေ့မိဘူး။၄၀၆ဖွင့်ခံရရင် အာမခံမရနိုင်ဘူး။ ပြစ်ဒဏ်၃နှစ်ရှိတယ်။
နီးစပ်ရာပြောပြပေးလိုက်ပါ။၁။စုကြေမလုပ်တာကောင်းပါတယ်၂။လုပ်ရင်ပြဿနာဖြစ်တာများပါတယ်။၃။ ထိုးသားကပေါက်ပြီးငွေဆက်မထည့်ရင် ဒိုင်ကဒုက္ခရောက်တတ်သလို ဒိုင်ငွေမထုတ်ပေးရင် ထိုးသားကရှုံးရောပဲဆိုတော့ နှစ်ဘက်စလုံး အန္တရာယ်ရှိာတာချည်းပါပဲ။
Posted by Oasisthetoo at 8:18 AM No comments: Links to this post
သားတို့ဖတ်ဖို့ ချစ်တပည့်တစ်ယောက်ရဲ့ အားဆေးတစ်ခွက်
တစ်နေကုန် တောင်ပြေးလို့မြောက်ရောက်နဲ့ အမောတွေက ပန်းလွန်းလို့ ကြောင်သွားပြီး မှိတ်မရသေးတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံကို အစာကျွေးရင်းနဲ့ Webပေါ်တက် Facebook ပေါ်လျှောက်သွားလိုက်တော့ ငိုက်မလို့ရှိသေး “ညီလေးဖတ်ဖို့” ရေးစရာ အကြောင်းဖန်လာပြန်ရော။ ခြင်တွေကလည်းကိုက် မျက်လုံးတွေ ကလည်းငိုက်တဲ့ ဆောင်းပူပူညလယ်ချမ်းမှာ ပြူးပြန်ပြဲလို့ “ညီလေးဖတ်ဖို့” ရေးတော်မူတယ်လို့ဆိုရင် အစ်ကိုလွန်သွားမလား။
ညီလေးခံစားချက်လေးတွေကို Facebook ပေါ်ရေးတင်ထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ တောင်ပေါ်က အမေ့ထမင်း ဟင်းတွေနဲ့ တောင်တန်းတွေကြား ဆောင်းမှာပွင့်တဲ့ ချယ်ရီပန်းတွေ ထင်းရှူးရနံ့တွေကို လွမ်းလိုက်တာလို့ အစ်ကိုနားလည်မိပါတယ်။
လှလိုက်တာ ညီလေးရာ။ အဲ့ဒီလို ခံစားတတ်တာလေးကိုက လှတာကွ။ အနုပညာဓါတ်ခံရှိလို့သာ ဒီလိုခံစားတတ်တာ။ နူးညံတဲ့စိတ်လေးနဲ့ တွေးမှသာ ဒါလေးတွေက လွမ်းစရာဖြစ်တာ။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက စစ်ကို အာသာမက်မက်နဲ့ ရက်စက်ထွဋ်ခေါင် ဂျပန်တွေက အဲ့ဒီလို နူးနူးညံညံလေးတွေ ခံစားတတ်အောင် ဟိုက္ကူဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဖွဲ့ကြတယ်တဲ့။ အခုခေတ်ဂျပန်လေးတွေကို အဲ့ဒီကဗျာလေးတွေနှင့် မူလတန်းကတည်းက နွေးစေခဲ့တာ ကိုယ်ချင်းစာစေဖို့ ကြုံလာရာ လောကဓံတွေကို ကြံကြံခံတတ်စေဖို့လို့ ဆိုတာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာလား စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာလား ၀ါးတားတားတော့ အစ်ကိုမှတ်ထား လိုက်မိတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ ငါ့ညီလေးဟာ စိတ်ထားနူးညံခံစားတတ်သူလို့ အစ်ကို ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။
ညီလေးကို ဟိုက္ကူလေးတွေ အမြည်းကျွေးမယ်နော်။
သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်တွေထိုးလို့ နေမခစိမ့်အေးမြနေတဲ့ရေအိုင်၊ ကြာပေါင်းစုံပွင့်လို့ လှနေတဲ့ရေအိုင်ထဲ ဖားလေးတစ်ကောင် ခုန်ချသွားတော့ “ပလုံ” ။ ရေပွက်ဝိုင်းလေးလည်းထသွားမှာပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ပြန်ငြိမ်သွားပြန်မပေါ့။ အစ်ကိုတို့ဘ၀တွေမှာလည်း “ပလုံ”ဆိုပြီးလှုပ်ခါသွားတတ်တာတွေက ခဏခဏပါ။ “ပလုံ” လေးတွေပြီးတော့ ငြိမ်သက်တတ်ဖို့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ဆောက်ကြရမှာပေါ့။ ညီလေးတို့လို နွေးထွေးတဲ့ အသိုက်အမြုံလေးအဝေးမှာ စားကျက်ရှာရတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ၀ပ်စရာ ကျင်းစရာလေးတွေ ရှာတတ်ကြရမယ်။ အစ်ကိုဆိုလိုချင်တာက စာပေ၊ ဂီတ၊ အနုပညာ လိုနေရာပေါ့။ နောက် Post တွေမှာ အစ်ကိုတို့ လက်တစ်ကမ်းက ဂီတ၀ပ်ကျင်းထဲ ဘယ်လိုဆင်းကြ မလဲ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကွာ။ ကြော်ငြာသွားတာနော်။
တစ်ဆက်တည်း ငါ့ညီရဲ့Post လေးတွေအရ အိမ်လွမ်းဝေဒနာရော ကြုံနေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်အလိုမကျ မနှစ်မြို့နိုင်တာရော ညီလေးစိတ်နဲ့ မတိုင်ဆိုင်တာလေးတွေရှိနေတယ်လို့ အစ်ကိုခံစားနေ ရတယ်။
အစ်ကို့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ်။ ဒိုင်နိုဆောနဲ့ ပိုးဟပ်ဟာ ကမ္ဘာဦးကတည်းက အတူတူရှိခဲ့ကြတာတဲ့ကွ။ ဒိုင်နိုဆောကြီးကတော့ကွာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးနဲ့ ထောင်ထောင် ဟိုပါသည်ပါလည်း ပါနေမှာပေါ့။ ဟိုမှာနိုင်စား သည်မှာနိုင်စား ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ အများအလယ်မှာ ၀င့်ဝင့်ထည်ထည်ကြီးနဲ့ သွေးနားထင်ရောက်ချင်ရောက်နေမှာပေါ့။ သူ့ပါဝါ၊ သူအားနဲ့ သူများကို လွှမ်းမိုးချင်တိုင်းလည်းလွှမ်းမိုးနေမှာပေါ့။ အစ်ကိုတွေးမိတာပါ။ တစ်ချို့က အင်အားဂုဏ်သိမ် ကြီးမားလာရင် ကိုယ့်အောက်ငယ်သားကို နိုင်စားတတ်ကြတာမဟုတ်လား။ တစ်ချို့ပါကွာနော်။
ဆက်ပြောရဦးမယ်ကွ။ ကမ္ဘာဆိုတာ ကာလအကြာကြီး ဖြတ်သန်းလာရတာဆိုတော့ ညီလေးသိတဲ့အတိုင်း အခုအခါမှာ ဒိုင်နိုဆောသတ္တ၀ါဟာ ပြတိုက်မှာတောင် အရိုးစုံစုံလင်လင်မြင်ရဖို့ ခက်သွားတာပေါ့။ သူထက်တော်တဲ့ သူ့ထက်ဉာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ အရာတွေအောက်မှာ စုန်းစုန်းမြှုပ် ပျောက်ကွယ်သွားရတော့တာပါပဲ။ ပိုးဟပ်ဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ ဟိုချောင်ကပ် ဒီချောင်ကပ်နဲ့ နေတတ်လို့ အစ်ကိုတို့ ဒီနေ့တွေနိုင်သေးတာပါတဲ့။ အစ်ကို့မိတ်ဆွေပြောချင်တာက ဒိုင်နိုဆောဟာ ပိုးဟပ်လို သိုသိုသိပ်သိပ်မနေတတ်လို့ ဒီနေ့ မတွေ့ရတော့တာဆိုတာပဲ ညီလေးရာ။
အစ်ကိုကတော့ ဒီလိုလှည့်တွေးတယ်။ ပိုးဟပ်ဆိုတာ ဟိုချောင်ကပ် သည်ချောင်ကပ် နေတတ်လို့ ဆိုတာထက် “သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်လိုရှင်သန်အောင်နေရမယ်ဆိုတာသိလို့” ဆိုတာပါပဲ။ အစ်ကို အယူအဆ ပြောပြရရင် “ဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်မှာလဲ” ဆိုတာက ဘ၀ရဲ့အနုပညာကွ။ ဒီအနုပညာကို ခံစားတတ်ရင် ညီလေးတမ်းတနေတဲ့ ချယ်ရီပန်းအလှတွေ တောင်ကြားတွေထဲက ထင်းရှူးနံသင်းသင်းလေးတွေကို ညီလေးနားမှာဘဲ ခံစားတတ်လာမှာပါ။
အစ်ကိုပြောတာ ရှုပ်သွားလား။ ထပ်ပြောမယ်ကွာ။ အစ်ကိုတို့ဘ၀တွေမှာ ပေးထားရတဲ့ ကတိတွေက အများသား။ ဥပမာကွာ ကျောင်းသားဆိုပါတော့။ သူဘ၀အတွက် အာမခံနိုင်တဲ့ ပညာတတ်ဘွဲ့ရဖြစ်ဖို့ သူ့ကိုယ်သူ ကတိပေးမထားရဘူးလား။ သူ့ကို အမြတ်တနိုးထား ကျွေးမွေး ကျောင်းထားတဲ့ သူမိဘကိုရောကွာ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်လာရစေမယ်လို့ ကတိပေးထားရတာပဲလေ။ ဆရာတွေ ဆိုရင်ကောကွာ ညီလေးစဉ်းစာကြည့် သူ့တပည့် တစ်ယောက် အောင်မြင်ပေါက်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးဖို့ ကတိတွေ ပေးထားရတာပဲ မဟုတ်လား။
စာရေးဆရာတစ်ယောက်က သူ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက် မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်တွေ ကရော သူ့ကိုအားပေးတဲ့ ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်အတွက် ကတိတွေပေးရတာပဲလေ။ အဆိုတော်ကွာ စဉ်းစာကြည့် အတူတူပါပဲ။ ကတိတွေ အထပ်ထပ်ရစ်လို့။ ဒီတော့လည်း ဒီကတိတွေ တည်ဖို့အရေး ကြိုးစားပေးဆပ်ကြရတော့တာပေါ့။
အစ်ကို အမေရိကန်ကဗျာဆရာ ရောဘတ်ဖရော့ရဲ့ ကဗျာတစ်စ(Stopping by wood onasnowy evening) ကို အက်ဆေးလေးထဲမှာ တွေ့တဲ့အတိုင်း ရွတ်ပြမယ်နော်။
ညို့ဆိုင်းနက်ရှိုင်း တောတန်းကဖြင့် လှပေရဲ့
ဒါပေမယ့် ငါ့မှာ တည်ရဦးမယ့်ကတိတွေနဲ့ပါလား
သည်ကဗျာလေးကို ဆရာမောင်ရင့်မာ(ကျောင်းကုန်း)က သူ့အက်ဆေး“ တောတန်းအလွန်” ရဲ့ အစမှာ ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့“လေ”နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတယ်ဆိုပြီး ဒီလိုလေးဖွင့်သွားတာပေါ့။
“ရွာနှင့်ဝေးဝေး လူသူမနီးလှတဲ့ တောတန်းကလေး။ အပင်တွေပေါ် နှင်းတွေဖွေးဖွေးလှုပ်နေသည်။ ညနေတစ်ခင်း.....။ ရေခဲအိုင်နဲ့ တောတန်းကလေးရဲ့အကြား၊ အဘယ်လယ်သမားအိမ်မှမရှိ၊ ပကတိ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။ မည်မျှတိတ်ဆိတ်နေသလဲဆိုလျှင် ငှက်မွေးလို ပေါ့ပါးသော မိုးနှင်း၏လွင့်မျှောသံ ကိုပင် ကြားနေရသည်။ သူ့မြင်းကလေးက သူ့သခင်ကြည့်ငေးနေသော အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်စွာ ခြူလေးလှုပ်လို့ သတိပေးလိုက်သည်။ ညို့ဆိုင်းနက်ရှိုင်း တောတန်းကလေးကို စွန့်ခွာရပေဦးမည်။.....လွမ်းဖွယ်”
အစ်ကိုဒီအက်ဆေးလေးအစ ဒီစာကြောင်းလေးဖတ်လိုက်ရလို့အဆုံးမှာတော့ ရင်ထဲထိသွားတယ်ကွာ။ အစ်ကိုနဲ့ အတော်များ တိုက်ဆိုင်နေသလားလို့။ ညီလေးလည်း ဒီစာစုလေးဖတ်ကြည့်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာတော့ ခံစားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အစ်ကိုတော့ နူးညံတဲ့အခံလေးရှိတဲ့ညီလေး ဖမ်းဆုတ်မိလိုက်မယ်လို့ တွေးနေမိတယ်။
အေးလိုက်မယ့်နေရာလေးကွာနော်။ နှင်းတွေဖွေးဖွေးလှုပ်လို့တဲ့။ ရေခဲအိုင်ကလေး နဲ့ တောတန်းလေး။ လှလိုက်တာမှကွာ ညီလေးရာ။ တိတ်ဆိတ်နေတာကလည်း မိုးနှင်းလေးတွေ လွင့်မျောနေသံတောင်ကြားရတယ်တဲ့။ ဒီလောက်ကြည်နူးချမ်းမြေ့စရာ နေရာလေးမှာ ငေးမောနေသူလေး ကိုအားမကျဘူးလား။ ဒါပေမယ့် သူ့မြင်းကလေးက ခြူလေးလှုပ်လို့ သတိပေးတယ်။......သွားစို့တဲ့။ သူကတော့ ညို့ဆိုင်းနက်ရှိုင်းနေတဲ့ တောတန်းလေးက စွန့်ခွာသွားရဦးမယ်......လွမ်းဖွယ် လို့ ပြောသွား တယ်နော်။ အစ်ကို သူ့ကို ကိုယ်ချင်းစာလိုက်တာ။ ညီလေးဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလဲ။ မခွာချင် ခွာချင်ခွာခဲ့ရမှာပေါ့။
ညီလေးချစ်တဲ့ တောင်ပေါ်က ချယ်ရီပင်တွေ၊ တောင်ကြားတွေထဲက လေစိမ့်အေးတွေနဲ့ တိုးဝှေ့ထွက်လာတတ်တဲ့ တောင်ရနံ့တွေ၊ အမေချက်ကျွေးတဲ့ ထမင်းချဉ် ဆိမ့်ဆိမ့်လေးတွေ၊ အဖေ၀ယ်ကျွေးမယ့် တွန်းလှည်းက ဂျုံခေါက်ဆွဲ မွှေးမွှေးလေးတွေ၊ ဈေးနေ့တွေမှ ရတတ်တဲ့ ၀က်သားချဉ်ထုပ်နဲ့ နံတုန်ခဲခဲလေးတွေ၊ ဆောင်းအေးအေးမှာ အငွေ့ထောင်းထောင်းတဲ့ ပေါင်းအိုးထဲက မုန်ညှင်းပေါင်းပူပူတွေ၊ ညဘက်မီးပုံးလေးတွေပေါ်တင်ကင်တဲ့ ခေါပုတ်ချပ် ပြားရှပ်ရှပ်လေးတွေကို စွန့်ခဲ့ပြီး တစ်ခြားဒေသကလူတွေ “မြူ” လို့ခေါ်ကြမယ့် မှိုင်းငွေ့တွေကို ကျောက်ဖားထိပ်မှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး ခွဲခဲ့ဖူးမှာပေါ့။ အစ်ကိုလည်း ညီငယ်လိုပဲ ခွဲခဲ့ရတာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကဗျာလေးနဲ့စာစုလေးက တို့ညီအစ်ကိုတွေကို ခံစားစရာတစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ အစ်ကို ယုံကြည်တာပေါ့။ ညီလေးလက်ခံလား။
ဆရာမောင်ရင့်မာကလေ ဒီမှာ အဆုံးသတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူကွ ညီရ။ ဒါက အစ။ အလယ်ကျတော့
“ကြည်နူးဆွတ်မြ ခံစားရခွင့်ဆိုသည်ကလည်း ဘ၀မှာ အစဉ်ထာဝရ “ရမြဲရ”တတ်သော အရာမဟုတ်ပါချေ။ သစ်ရိပ်ဝေးဝေး၊ တောတန်းအေးအေး၊ ညနေနွေးနွေး၊ ပန်းမြမွှေးမွှေးတို့သာရှိမည့် သီးခြားဖြစ်သော ကမ္ဘာလေးထဲ ကြာတောင့်ကြာရှည် လွင့်မျှောမိန်းမူးနေလို့မဖြစ်။ လူသားတစ်ယောက် အနေဖြင့် ထားရှိသော ကတိ၊ ထမ်းရမည့်ဝန်တာ၊ မွေးဖွားလာသည်မှ သေလွန်သည်အထိ တစ်ဘ၀စာ သို့မဟုတ် ဘ၀အဖန်ဖန် ဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သော တစ်သံသရာဆုံးသည်အထိ တနုံနုံ တနဲ့နဲ့ နှင်လေဦးမည့် ခရီးတာဆိုသည်တို့ကို မေ့လျော့ချန်သွား ပစ်ပယ်ထားလို့မဖြစ်။
သားသမီးက အမိအဖအပေါ်တည်ရမယ့်ကတိ၊ မိတ်ဆွေရောင်းရင်းက သူ့အပေါင်းအသင်း ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါ်တည်ရမယ့်ကတိ၊ အိမ်ဦးနတ်က သူ့မိသားစုအပေါ်တည်ရမယ့်ကတိ၊ ရပ်ရွာလူကြီးက သူ့ရပ်ရွာအပေါ်တည်ရမယ့်ကတိ၊ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်က သူ့တိုင်းပြည်အပေါ်တည်ရမယ့်ကတိ အဲ့သည်ကတိတွေကို မေ့လျော့ပစ်ပယ်၍ တောတန်းနံဘေး၊ မည်မျှကြာရှည် ရပ်ကြည့်ငေးမော လွင့်မျောနေနိုင်ပါမည်နည်း။”...............ဆိုပြီးလုပ်သွားပြန်ရော။ ဆရာမောင်ရင့်မာ ဆက်ပြောတာက-
“ဒါပေမယ့် ငါ့မှာတည်ရမယ့် ကတိတွေနဲ့ပါလား” “မအိပ်ခင်သွားရဦးမယ့်ခရီးမိုင်တွေနဲ့ပါလား”..........တဲ့။
ဒီလောက်ဆို ငါ့ညီလည်း ဇာတ်ရည်လည်လောက်ပါပြီ။ အပေါ်မှာ အစ်ကိုပြောခဲ့သလို ဆရာမောင်ရင့်မာ ရေးဖွဲ့ပြခဲ့သလို အစ်ကိုတို့တစ်တွေဟာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကိုယ်လွမ်းမောရာ နေရာ၊ ၀ါသနာ စတာတွေမှာ ကြာတောင့်ကြာမော မျှောနေဖို့ အခွင့်မှမရှိကြတာ။ ညီလေးကတော့ ထင်ချင်ထင်မယ်။ ငါမချမ်းသာသေးလို့.....လို့။ ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးညီလေးရာ။ အစ်ကိုတို့ “မိုးကုတ်သား ငွေကိုလေလိုသုံးသူ” တစ်ခေတ်တစ်ခါက တင်စားခံရဖူးတဲ့ သူဌေးကြီးဦးမြမောင်ဟာ တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ ဟိုတယ်မှာနေ ဟိုတယ်မှာစား သောက်စားဖြုန်းတီး နေရင်းက စကားတစ်လုံးပြောသွားဖူးတယ်တဲ့။ “ကျွန်တော် ဒီလို သုံးဖြုန်းနေရတာ ဘ၀ကို ကျေနပ်တယ် ထင်သလား” တဲ့။
ကဲညီလေးရေ အပေါ်ရေးတာတွေ ပြန်ကောက်ရရင် ဘ၀ကိုဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ ဘ၀အနုပညာပါ။ အစ်ကိုတို့ပေးထားမိကြတဲ့ကတိတွေကို တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင် တနုံနုံ တနဲ့နဲ့ နှင်ကြရဦးမှာပါ။ ဒီကတိတွေကို မြင်တတ်လို့ တည်တတ်အောင်ကြိုးစားရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးအယူအဆလေး ငါ့ညီမှာ ရလာရင် ညီလေးကြုံရနေတာ ခါးသီးစရာဘ၀တွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကတိတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု မှန်မှန်လေး တည်ဆောက်ရင်း နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါ အတော်ပြီးနေတာကို တွေ့ရပြီး ကျေနပ်အားရ ကြည်နူးစရာတွေ ကြုံရမှာပါ။
ညီလေးတက်ခဲ့ဖူးမယ့် ပင့်ကူတောင်ထိပ်ရောက်လို့ ပြန်ငုံကြည့်တဲ့အခါ ငါအမြင့်ကြီး တက်ခဲ့မိတာပါလားလို့ ၀မ်းသာအားရဖြစ်မှာပါ။ လေနုအေးလေးတွေလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ငါ့ညီနှစ်ခြိုက်တဲ့ တောင်ရနံ့လေးတွေလည်း တစ်ဝကြီး ရှုရှိုက်ခွင့်ရလိုက်မှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ငါ့ညီ တောင်တွေ တစ်တောင်ပြီးတစ်တောင် တက်ဖူးပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီလိုနဲ့ ကတိတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။
အစ်ကို့စာဖတ်ရတာ ငါ့ညီ ပျင်းသွားပြီလား။ အစ်ကိုတို့ ဆရာမောင်ရင့်မာရဲ့ “တောတန်းအလွန်” ဆိုတဲ့ ၀ပ်ကျင်းလေးထဲမှာ ပုန်းခိုနေလိုက်ကြတာ စိတ်သက်သာရာ အတော်ရသွားပြီနော်။ ဆရာ့ရဲ့ နိဂုံးလေးကို ခံစားကြည့်လိုက်စို့အုံး..........
“တစ်ခုပဲရှိပါသည်။ စိမ်းဖန်စိုလက်သော တောတန်းနံဘေး၌ ကြာရှည်ကြာမျောနေလိုဇောဖြင့် တည်ရမယ့် ကတိတွေကို “ထိုးကျွေး” မပစ်သင့်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်” ..........တဲ့ဗျား။
အစ်ကိုလည်း ၀ါသနာပါတဲ့တောတန်းလေးနံဘေး ထိုင်နေမိတာ ကတိတွေတောင် “ထိုးကျွေး” မိတော့မလို့........။ အစ်ကိုလည်း အိပ်တော့မယ်။ မနက်နှစ်နာရီ ထိုးပြီးနေပြီ။ မနက် သမီးလေး ကျောင်းအမီ ပို့ဖို့အရေး သူ့အမေဟင်းချက်ဖို့ စောစောဈေးထပြေးပေးရဦးမယ်။ နောက်ပြီး နေ့လည်မှာ ဆင်နွှဲမယ့် အစ်ကိုအလုပ်စကားစစ်ပွဲအတွင်း အိပ်ငိုက်မနေအောင်တော့ အိပ်တော့ထားရဦးမယ် မဟုတ်လား။ အစ်ကိုအလုပ်ဆိုတာက နေ့စဉ်တည်ရမယ့်ကတိတွေကို ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲတွေထဲ အစဉ်လိုက်ရေးမှတ်ထား ရတာမျိုး။ အစ်ကိုတောင် မနေ့က ဒိုင်ယာရီအသစ် ၀ယ်ထားပြီးပြီ။ နှစ်သစ်မှာ ပေးရမယ့် ကတိအသစ်တွေ အတွက်လေ...........။
ဖုန်းဝယ်တာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ် ဖုန်းကဒ်ဖိုးတွေက မြင်တဲ့အတိုင်း စင်းကဒ်တွေ အလားပေးရင်တောင်
ရှုံးလိမ်မယ်တော့ မထင်၊ဒါက မိမိနှင့် မိမိဇနီ အသုံးပြုမှုဘဲရှိ့သေးတာ ၊သားတွေကော သူတစ်ပါးတွေကော
ကော.......ကော.............??????????????????????????? :) (တစ်ခုကထပ်သွားတယ် )
Posted by Oasisthetoo at 6:33 AM No comments: Links to this post
ထူးခြားသော ရိုးရာအနေအထားလေးအတိုင်း တွေ့နိုင်သေးသည့်လူမျိုးစုရွာလေးမှာ ၁၈၈၆ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့စစ်အောင်နိုင်ပြီးနောက် မိုးကုတ်ကိုသိမ်းယူသောအခါတွင် မေဂျာချားလ်ဘားနဒ်က ၄င်း၏စစ်တပ် ဖြင့် မိုးကုတ်ဧရိယာသို့ ပြောင်ဂေါင်းခေါ်သောအရပ်မှ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘားနဒ်ရွာဟုအမည် ပြောင်းခဲ့သော ရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဘားနဒ်ရွာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာများကို ငါးရက်တစ်ခါ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် ဈေးနေ့များ၌ ထိတွေ့လေ့လာနိုင်သလို ဒေသခံအစားအသောက်များအပြင် သဘာဝကျကျ ချက်သော ဒေသခံလီရှောအရက်ကိုလည်း ဟိုဆိုင်ဝင်သည်ဆိုင်ထွက် မြည်းစမ်းသောက်နိုင်သေးသည်။ စစ်ငွေ့စစ်ရိပ် သမ်းခဲ့ဖူးသော သမိုင်းရှိသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သည်သမိုင်းတွေပြောလျှင် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် ပတ္တမြားငမောက်ရာဇ၀င်မှာလည်း ဖျောက်ထား၍ မဖြစ်ပေ။ ပတ္တမြားငမောက်ဆက်သရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် လူတစ်စုအား ဘုရင်ကကွပ်မျက် လောင်တိုက်သွင်း ရာအရပ်ကို လောင်းစင်ဟုခေါ်သော ရွာငယ်လေးအဖြစ်တွေ့နိုင်သေးသည်။ ထိုလူတစ်စုမှ ထွက်ပြေးလာသူ ဒေါ်နန်းမှာ မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းကျပ်ပြင်အ၀င်ရှိ တောင်ပေါ်အရောက်ဝယ် နောက်ပြန်ကြည့်ရာ ဆွေမျိုးတို့၏ လောင်စင် တိုက်မှ မီးခိုငွေ့ငွေ့များကို မြင်ရ ရင်ကွဲနာကျကာ ကွယ်လွန်ရှာပါသည်။ အဆိုပါတောင်တော်အား ဒေါ်နန်းအရှင်မ စောင့်ရှောက်လို့ ဒေါ်နန်းကြည့်တောင်တော် အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည်။
ရာဇ၀င်နှင့်ချိန်ညှိ နိုင်စရာ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်မှာ ရတနာနှင့်နွယ်ပြီး ကွယ်လွန်ကုန်ရှာသော ဆွေမျိုးတို့ အတွက် ရင်နာရလေသူ တောင်တော်သခင်မ ဒေါ်နန်းစောင့်ရှောက်ရာ တောင်တော်တစ်ဝိုက် ရတနာကြွယ်သော ရတနာနယ်ဖြစ်ပါလျှက် ထူးခြားစွာ ရတနာမထွက်တာ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ဆိုးကို စိတ်တော်နာလေလို့ ထင်ရဲ့။
ပတ္တမြားငမောက် အဖိုးကြွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ French Trade Mission မှ မိုးကုတ်ဒေသတစ်ခုလုံးကို ၀ယ်ရန် မြန်မာမင်းထံကမ်းလှမ်းခဲ့သည်တွင် မြန်မာမင်း၏ကိုယ်စားလှယ်က ငမောက်ပတ္တမြားကို ရေထည့်ထား သည့် ဗန်းငယ်အတွင်း ထည့်၍ပြသသည်ဟုဆိုသည်။ ဗန်းငယ်တွင်းရှိ ရေတို့အရောင်မှာပတ္တမြား၏ အရောင် အနီသို့ ပြောင်းသွားသည်တဲ့။ သည်အခါမှ သည်လိုအဖိုးတန်ကျောက်တွေ မရေမတွက်နိုင် လောက်အောင် ထွက်နိုင်သော မိုးကုတ်ရတနာမြေကိုဝယ်ရန် ကမ္ဘာတွင်းရှိ ပိုက်ဆံအားလုံးဖြင့်ပင် မလောက်ဟု အကြောင်းပြ၍ ပြင်သစ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်ကို ငြင်းခဲ့ရဖူးသည်ဟုမှတ်သားရသည်။
ရတနာဆိုတာ အဖိုးထိုက်တန်ခြင်း၊ ရှားပါးခြင်း၊ လှပတင့်တယ်ခြင်း၊ နန်းသုံးတော်ဝင် လူကြိုက်များ ခြင်းတို့ရှိမှ ရတနာမည်ပါသည်။ ပတ္တမြားငမောက်ကဲ့သို့သော အဖိုးထိုက်ရတနာတွေနှင့်ခင်းထားသော မိုးကုတ် ရတနာမြေကို အဘယ်ခရီးသွားက လွှဲချော်ပြီး သွားနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပါမည်နည်း။
ရတနာမြေဟုခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း စံတစ်ခုကို ညွှန်းပြုလိုပါသေးသည်။ ကမ္ဘာတွင်ပင် ရှားမည့်အမျိုးပင်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ သေးသေးကွေးကွေးလေးလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် နှစ်ပေကျော်ကျော်မြင့်၍ သုံးပေ ပတ်ပတ်လည် အကျယ်လောက်ရှိပြီး ရွှေချိန်(၁၅၀)ကျပ်သားပေါ်တွင် မိုးကုတ်ထွက်ရတနာ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ဂေါ်မုတ်၊ ဥဿဖယား၊ ပုလဲ၊ မိုးကုတ်မြ၊ ပြောင်ဂေါင်းစိမ်းစသော တွင်းထွက်ရတနာစစ်စစ်တို့ဖြင့် မိုးကုတ် ပန်းတိမ်ဆရာတွေက စီကာခြယ်ခတ်အလှဆင်သထားသည့် ပတ္တမြားပလ္လင်နှင့် ငွေပလ္လင်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပတ္တမြားပလ္လင်တော်မှ ပိုလျှံသောရတနာတို့ဖြင့် စီခြယ်ခတ်လုပ်ထားသော အောက်ခံငွေသားအလေးချိန်(၂)ပိဿာ၊ (၆၁)ကျပ်သားရှိ ငွေပလ္လင်တော်မှာလည်း ကျောက်မျက်ရတနာထည်ထည်ဝါ၀ါနှင့် မိုးကုတ်မြို့လယ်ဖော်တော်ဦး ဘုရားတွင်ထားရှိပါသည်။ ဖောင်တော်ဦးရုပ်ပွားတော် မြတ်နှစ်ဆူစံတော်မူရန်ဖြစ်သည်။
မိုးကုတ်နေသူများက ဖောင်တော်ဦးရုပ်ပွားတော်မြတ်အား ကြည်ညိုမဆုံး၍ မိမိတို့ပိုင်ရတနာများကို ရွှေသားသင်္ကန်လွှာအတွင်း ထိုးသွင်းမြှုပ်နှံပူဇော်သဖြင့် နောင်တွင်ရုပ်ပွားတော်အဆင်းသဏ္ဍန်ကို ပျက်ယွင်း စေမှာစိုးသောကြောင့် လှူဒါန်းလိုသောရတနာများကို လက်ခံသိမ်းဆည်းပြီး စုပေါင်း၍ ပလ္လင်တော်နှစ်ဆူ ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ သည်ပလ္လင်တော်နှစ်ဆူတွင် မိုးကုတ်သားတို့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သလို တစ်ခေတ်တစ်ခါက ကြွယ်ခဲ့သောခေတ်အရိပ်တွေ ထင်နေပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ကာပြတိုက်တို့၌ ပင်ရှားလောက် သော အဖိုးတန်ပစ္စည်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော်အား နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ ဘာသာဝင်မျိုးစုံတို့ ကင်မရာအစုံစုံကို လက်က မချစတမ်း ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းယူ လေ့လာနေကြသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်၍ မဟုတ်ပါ။ ရွှေသားတို့အိနေအောင် ရွှေစင်ရွှေလွှာတွေ အထပ်ထပ်ကပ် နေသူများကိုအံသြခြင်းနှင့် ရွှေတုံးရွှေခဲဖြစ်နေသော ရှေးဟောင်းရုပ်ပွားတော် အနုလက်ရာကို အံ့ချီးဘနမ်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သည်ကဲ့သို့ဆိုလျှင် မိုးကုတ် ဖောင်တော်ဦးဘုရားပေါ်က ရတနာပလ္လင်နှစ်ဆူသည် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတို့အား ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားပြသစရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မည်မှာလည်း အသေအချာပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေသနှင့်သဘာဝအလှများအပြင် နှလုံးအလှများကိုလည်း ပြောပြလိုသေးသည်။ ရှေးမိုးကုတ်ကျောက်တွင်း များတွင် နေ၀င်မိုးချုပ်လို့ တွင်းဆေးမပြီးသေးပါက (ကျောက်ရွေးမပြီးသေးပါက) သဲဖတ်ပုံကို သစ်ခက်ငယ်တစ်ခု ထိုးထားတတ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဒါက ကျောက်ဆက်ရွေးရန်ရှိ သေးသော သင်္ကေတ။ ဒါဆို ဘယ်သူကမျှ သည်သဲဖတ်ပုံ ၀င်မနှိုက် တတ်ကြသည့်အပြင် ကျောက်ပေါ်နေလျှင်တောင် သဲဖတ်ပုံထဲပြန် ထိုးထည့်သွား တတ်ကြသေးသည်တဲ့။ မိုးတွေရွာလို့ ဗြုံးမြေပုံပေါ်ကျောက်ပေါ်နေလျှင်လည်း အသာထိုးမြှုပ်ပြီး ပိုင်ရှင်ကို အပြေးအကြောင်းကြားရတာလည်း ချစ်စရာဖြစ်သည်။
နောက် တွင်းဆေးလျှင် ကျောက်ကုန်သည်က တွင်းဆေးရပ်ကွက်ထဲ လာသည်။ လမ်းပေါ်ကနေ “ဘယ်သူဘယ်ဝါရေ ဘာရထားပြီးလဲ” အော်မေးတတ်သည်။ တွင်းသားများကရထားသော ကျောက်ထုပ်ကို တွင်းတဲသက်ကယ်မိုးတွင် ထိုးထားလေ့ရှိတတ်သဖြင့် ယူကြည့်သွားရန် ဗြုံးဆေးခွက်ထဲက ပြန်အော်တတ် ကြသည်။ သည်မှာကုန်သည်က ကျောက်ထုပ်ယူကြည့် ရွေးဆယ်ပြီး ဈေးပေးတတ်ကြသည်။ ဈေးတည့်လျှင် ငွေချေ ယူသွား မတည့်လျှင် သက်ကယ်မိုးကြား ပြန်ထားခဲ့။ ဘယ်သူကမျှ မတိုမလျှိုကြပါ။ သိပ်ရိုးစင်းသည့် စရိုက်လက္ခဏါများဖြစ်သည်။
ဧည့်သည်လာလျှင် စိမ်းစိမ်းကျက်ကျက် အပြေးအလွှားထမင်းစားခေါ်သည်။ မစားလျှင်စိတ်ဆိုးသည်။ အိမ်လာလည်လျှင် ရေနွေးကြမ်း(လက်ဘက်ရည်)က ဗန်းနှင့်အသင့်။ အိမ်တိုင်းမှာ အပိုဆောင်ထားတာက အိပ်ယာ၊ စောင်၊ ခြင်ထောင်။ ဧည့်သည်ပြန်လျှင် “ဖြေးဖြေးနော်” လို့နှုတ်ဆက်တာကဓလေ့။ လက်ဖက်၊ မက်ခေါက်၊ မက်မန်းတွေကလက်ဆောင်။ အမေမာ ကျွန်တော်တို့ဆိုလျှင် ဖွားဖွားမာခေါ်ရမည့် လူထုဒေါ်အမာ၏ အမေ့ရှေးစကား စာစုတွေထဲ သည်ဖြေးဖြေးနော်ကို ချီးကျူးရေးသားထားတာ တွေ့လိုက်တော့ ကျွန်တော်မိုးကုတ်သား ပီတိဖြာရသည်။ သည်စိတ်ရင်းလေးတွေက အခုအချိန်မှာဆို ဆင်ပိန်လျှင်ကျွဲလောက်တော့ ကျန်သေးသမို့ ခရီးသွားတို့အတွက် စိတ်နွေးစရာ အနေအထားဆိုလည်း မမှားနိုင်သော အရပ်ဖြစ်သည်။
ဒါတွေအပြင် မိုးကုတ်သားတို့၏ ကျောက်ထွက်သော ဗြုံးမြေကြောရောက်အောင် မျောတိုင်၊ ၀ါး၊ သစ်ခက် (မိုးကုတ်အခေါ်မြက်)တွေသုံးပြီး လေးပင်တွင်းနှင့် ဖောက်ဆင်းကာ မြေအောက်က ဗြုံးကြောကို လှိုဏ်ဖောက် လှိုက်စားတတ်သော မိရိုးဖလာ အင်ဂျင်နီယာ အတတ်ကလည်း အံ့မခန်းစရာ။ ဒါတွေက ခရီးသွား တွေအလယ်မှာ မူရင်းအရှိအတိုင်း ပြသလို့ရသည်။ သည်လိုမိုးကုတ် image တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တယားရှိ ကျောက်မျက် ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုတွင် လူလုပ်အရုပ်များဖြင့် ၄င်းတို့ရင်းမြစ်များ ယောင်ယောင် ပြသထားကြောင်းသိရသည်။
ဤကဲ့သို့သော မိုးကုတ်သည် အဘယ့်အတွက်ကြောင့် ရွက်အုပ်သီးအဖြစ်နှင့်နေရပါသနည်း။ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားစာမျက်နှာပေါ် တက်မပြနိုင်ရရှာပါသနည်း။ လုံခြုံရေးအတွက်လား။ လာရောက်သော နိုင်ငံခြားသား တို့ကို ကျောက်မျက်ခိုးထုတ်ရောင်းချမှာ စိုးကြသည့်အတွက်လား။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်မှ ရတနာ နှင့် နိုင်ငံတစ်ကာသို့ ပွဲထုတ်ခဲ့တာ ရာစုချီနေပါပြီ။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းသည့်တစ်ချက်မှာ ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်သားရတနာကုန်သည်များ နိုင်ငံတကာ ကျောက်မျက်ရတနာဈေးကွက်သို့ သွားရောက်လေ့လာသောအခါ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုသည်မှာ ထိုင်းခေါ် ယိုးဒယားမှသာထွက်သည်ဟု ကြားသိလာရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်း တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံး မည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်တွင် သည်ဈေးကွက်ကို ပင်ရင်းမိုးကုတ်သို့ ရွေ့ကြည့်ဖို့တာဝန်ရှိပါပြီ။
မိုးကုတ်တွင် ထိုင်းမှာကဲ့သို့ ခုံတစ်လုံးချ၍ ထိုင်ဝယ်ရနိုင်သော Gem Market ကျောက်မျက်ဈေးတစ်ခု တည်ဆောက်ကြည့်သင့်ပါပြီ။ ထိုဈေးတွင် One Stop Service တွေထားကာ ရောင်းချကြသောရတနာကို ချက်ချင်းအခွန်ဖြတ်၍ ၀ယ်သွားလိုသူတွေ လွတ်လပ်စွာ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးလိုက်လျှင် မည်သူမျှ အပင်ပန်းခံ ထောင်လက်တစ်ကမ်းလှမ်းမှ ခိုးထုတ်နေကြမည်မဟုတ်ပါ။ ကွန်ချက်ကိုအမည်ဝှက်ခံနေရသော ဘ၀မှ လွတ်ကာ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့လည်း မားမားမတ်မတ်တက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သယံဇာတယိုဖိတ်မှုကို တားနိုင်မည့်အချက်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ရှေးယခင်ခေတ်များက ဘုံဘေကုလား ကုန်သည်များသည် မိုးကုတ်ရတနာ ကုန်သည်တို့၏ ကော်ဇောပေါ်ဝယ် တရိုတသေ၀ယ်ခဲ့ဖူးရသည်ကို သတိတရ ရှိသင့်ပါသည်။ မိုးကုတ်ရတနာ ဈေးကွက် တစ်ခေတ်ဆန်းစေရန် တာဝန်ရှိသူများ စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။
ထို့အတူ သည်ဒေသမှာ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖွံဖြိုးလာလျှင် ဒေသခံတို့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စားသောက်တည်းခိုရေးများအပြင် ဒေသထွက်အမှတ်တရပစ္စည်းလုပ်ငန်များတွင် အချိုး ညီမျှစွာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ရလာနိုင်မှာဖြစ်သည်။ အရာရာကို အလေးအနက်ထား၍ မြန်မာ့ရေမြေ စိတ်ရင်းနှင့်ကိုက်အောင် အသွင်ပြောင်းပေးနေသော သမ္မတကြီးဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတော်တွင် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ စီးဝင်လာမည့်လမ်းတရပ်ကို လက်လွှတ်မခံသင့်ဟု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဒါကပတ္တမြားဆန်ကျိုး အဖိုးပြည်တန် တွေထွက်သော မြန်မာ့ရတနာမြေကို ကမ္ဘာကသိစေရန် ထားရှိသင့်သော ဇာတိမာန်အဖြစ်လည်း ဆိုချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှ ပုဂံဒေသသည် နိုင်ငံခြားသားတို့၏ Favorite နေရာဖြစ်သောအခါ ဒေသခံများ အနေဖြင့် ဒေါင့်အမျိုးမျိုမှ အလုပ်အကိုင်တွေ ရလာကြသည်မှာ မြင်သာနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မြို့လေး လည်း ခရီးသွားမြိုတော်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်လျှင် ပညာတတ်သူများလည်း ပညာတတ်သူများအလိုက် အလုပ် အကိုင်ရကာ ကျန်သူများလည်း မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းရာအလိုက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရလာပါက ရတနာကိုမျှော်ပြီးကြီးရသော လူမှုလူတန်းစားဘ၀မှလည်း ဖြန့်ထွက်လာနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နိုင်ငံသယံဇာတကို ကြီးကြီးမားမားမထိခိုက်ဘဲ အပေါ်ယံကိုသာ ပြစားရသည့် ခရီးသွားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းကို ထိန်းသိမ်းလုပ်ကိုင်နိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက် အသက်ရှုချောင်စရာ ဖောက်ထွက် လမ်းတစ်ခုဟုလည်းဆိုချင်ပါသည်။
များမကြာမှီတွင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် အာဆီယံရင်ပြင်တွင် ဥက္ကဋ္ဌနေရာဖြင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ထယ်စွာ ခြေချတော့မည်။ လာမည့်ဆီးဂိမ်းကစလို့ ဧည့်သည်ကို ပျူပျူငှာငှာကြိုဆိုကာ ဟိုဟိုသည်သည် အလည်ပို့ပေး သော အိမ်ရှင်နိုင်ငံလေးဖြစ်ရပါမည်။ အမေရီကန်အခြေစိုက် CNN ရုပ်သံသတင်းဌာနက မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ သွားလာလည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံနေရာကိုးခုတွင် နံပါတ်သုံး အဆင့် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ကြောင်း သတင်းများအဆုံးဝယ် မိုးကုတ်ဆိုတာလည်း ခေါင်းပြူထုတ်ရတော့မည့် ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဦးလှဝင်း(လေသူရဲတစ်ဦး)ကလည်း True News ဂျာနယ်တွင် နှစ်တရာကျော်က အဆောက်အုံများ ဆောင်ပါးဖြင့် မိုးကုတ်၏သမိုင်းဝင်များကိုရေးနေပြီ။ ဆရာက “တစ်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဝတံခါးဖွင့်ဝါဒ ကျင့်သုံးတဲ့ခေတ်အခါ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ နှစ်စဉ်လူအများ ဆုံးလာရောက်လည်ပတ်မယ့် မြို့ဟာ မိုးကုတ်ပါပဲ” အဆိုပြုထားသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်တို့မြို့လေးကို မိုးကုတ်သည် ခရီးသွားမြို့လေးဖြစ်သင့်သည် ဟုဆရာနှင့်ထပ်တူ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါသည်။ ချစ်သောမိုးကုတ်ရေ အမောတွေ ပြေပါတော့နော်။
Posted by Oasisthetoo at 11:10 PM No comments: Links to this post
လူထုကျန်းမာရေး (((လေဖြတ်မည့် ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ - ၁၁ချက...
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စုံစမ်းမေးမြ...
မြနန္ဒာဂျာနယ် အတွဲ-၁၊ အမှတ်၄၂၊ စာမျက်နှာ-၁၃က ဆောင်း...
ဖုန်းဝယ်တာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ် ဖုန်းကဒ်ဖိုးတွေ...